" သူမ​ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ ဘုရားသွားကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲမင်းသမီးလေး ခန့်'' - Cele Gabar
” သူမ​ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ ဘုရားသွားကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲမင်းသမီးလေး ခန့်”
By KoePosted on April 7, 2022
CeleGabarပရိသတ်ကြီးရေ ခန့် ကိုတော့ပရိသတ်တွေတော်တော်များများကရှေးရေစက်အဖြသ်မှတ်မိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ အချစ်ဖွဲ့လေညင်းဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ရှေးရေစက်အဖြစ်ပါဝင်ပြီးနောက်ပရိသတ်တွေပိုမိုသတိထားမိခဲ့ကြတာပါ။
အပြစ်ပြောစရာမရှိအောင်လှရက်နိုင်လွန်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွဲမင်းသမီးတွေထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ခန့်ကတော့ အမြဲပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်မပြတ်သွားအောင်သူမရဲ့Pageကနေ အလှပုံလေးတွေအပြင် အကဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေလည်းတင်ပေးလျက်ရှိတာပါ။ ဒါ့အပြင်ဒီနေ့ကျရောက်တဲ့ဧပြီလ၇ရက်​ေန့ကတော့သူမ​ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဒီ​နေ့က ဒီကောင်မလေးရဲ့ မွေးနေ့ပေါ့……. 🎂”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့ မွေးနေ့မှာဘုရားတက်ကာ ကုသိုလ်ယူခဲ့တဲ့ပုံရိပ်လှလှလေးတွေကိုတင်လာခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ်တွေလည်း ခန့်ရဲ့မွေးနေ​့အတွက်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့ပါဦးနော်။
Source – Khant
” သူမ​ရဲ႕ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာ ဘုရားသြားကုသိုလ္ယူခဲ့တဲ့ ဇာတ္လမ္းတြဲမင္းသမီးေလး ခန္႔”
CeleGabarပရိသတ္ႀကီးေရ ခန္႔ ကိုေတာ့ပရိသတ္ေတြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေရွးေရစက္အျဖသ္မွတ္မိၾကမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္။ အခ်စ္ဖြဲ႕ေလညင္းဇာတ္လမ္းတြဲမွာ ေရွးေရစက္အျဖစ္ပါဝင္ၿပီးေနာက္ပရိသတ္ေတြပိုမိုသတိထားမိခဲ့ၾကတာပါ။
အျပစ္ေျပာစရာမရွိေအာင္လွရက္ႏိုင္လြန္းတဲ့ဇာတ္လမ္းတြဲမင္းသမီးေတြထဲကတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့ ခန္႔ကေတာ့ အၿမဲပရိသတ္ေတြနဲ႔အဆက္မျပတ္သြားေအာင္သူမရဲ႕Pageကေန အလွပုံေလးေတြအျပင္ အကဗီဒီယိုဖိုင္ေလးေတြလည္းတင္ေပးလ်က္ရွိတာပါ။ ဒါ့အျပင္ဒီေန႔က်ေရာက္တဲ့ဧၿပီလ၇ရက္​ေန႔ကေတာ့သူမ​ရဲ႕ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
“ဒီ​ေန႔က ဒီေကာင္မေလးရဲ႕ ေမြးေန႔ေပါ့……. 🎂”ဆိုတဲ့စာေလးနဲ႔ ေမြးေန႔မွာဘုရားတက္ကာ ကုသိုလ္ယူခဲ့တဲ့ပုံရိပ္လွလွေလးေတြကိုတင္လာခဲ့တာပါ။ CeleGabarပရိသတ္ေတြလည္း ခန္႔ရဲ႕ေမြးေန​့အတြက္ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးခဲ့ပါဦးေနာ္။
Previous post ” အလုပ်လုပ်လို့ရရှိခဲ့တဲ့ဝင်ငွေထဲက မိခင်ကြီးကြိုက်တာလှူဒါန်းနိုင်ဖို့အတွက် (500000)ကန်တော့ခဲ့တဲ့ဂျွန်လွင်”
Next post ပထမဆုံးရင်သွေးလေးလွယ်ထားရကြောင်းအသိပေးလာတဲ့ Jeon Hye Bin